Ciidmada Puntland ee Gaalkacyo oo la Weeraray iyo Sarkaal lagu dilay Gedo |
Weerarkan ayaa la sheegay inay ku dhinteen laba askari oo koontaroolkaas ku sugnaa iyadoo uu ku dhaawacmay mid kale, waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in kooxaha weerarka geystay ay baxsadeen.
Saraakiisha amniga Puntland ee Gaalkacyo ayaan weli ka hadlin weerarka, inkastoo howlgallo laga sameeyay Waqooyiga magaalada Gaalkacyo lagu soo qabqabtay tiro dhallinyaro oo lagu eedeynayo qaraxaas.
Kooxo hubeysan ayaa weeraro noocan oo kale ah horay ugu qaadeen askar ka tirsan maamulka Puntland oo ku sugan xaafadaha Waqooyiga degmada Gaalkacyo, kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dhanka kale, saddex dhallinyaro ah oo ku hubeysan bastoolad ayaa ku dliay xalay deegaanka Ceel-cadde ee gobolka Gedo sarkaal ciidamada dowladda ka tirsanaa oo lagu magacaabi jiray Cali Saalax.
Saddexdii dhallinyarada ahayd ee weerarka geystay ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen, mana jirto illaa hadda cid loosoo qabtay dilka loo geystay sarkaalkaas.
Maamulka gobolka Gedo iyo saraakiisha ciidamada ee dowladd Soomaaliya ayaan sidoo kale ka hadlin weli dilka sarkaalkaas, iyadoo aysan ahayn markii ugu horreysay oo sarkaal ciidamada dowladda ka tirsan lagu dilo gobolka Gedo.
Dilkan ayaa imaanaya kaddib dagaallo ka dhacay degmada Balad-xaawo oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwaasoo sababay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac.